Misarika Ny Saina Ho Amin’ny Haintany Ratsy indrindra Tao Anatin’ny Tantara Vao Haingana Tao Lesotho Ny Fibitsihana Mivantana Tanaty Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2016 16:54 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, English
Ny 24 Febroary 2016, nikarakara fifampiresahana mivantana tanaty Twitter, #askLesotho, ny Send a Cow, fikambanana iray mpanao asa soa ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena, miorina any Angletera, mba hiresaka momba ny haintany ratsy indrindra tany Lesotho tao anatin'ny tantara vao haingana sy ny tsy fisian'ny fifantohan'ny sain'ny media tamin'izany.
Tamin'ny volana lasa, nanambara fitondràna amin'ny tany misy loza voajanahary i Lesotho, fanjakana iray voadidin'i Afrika Atsimo tanteraka. Araka ny manampahefanan'ny Firenena Mikambana ao an-toerana, iray amin'ny Basotho telo no mety mila fanampiana ara-tsakafo hatramin'ny taona ho avy.
Nilaza ny talen'ny Fandaharanasa Ara-tsakafo Erantany ao an-toerana, Mary Njoroge, fa voatery nampihatra rafitra ratsy hifanaraka amin'izany ny olona, izay ahitana ny fivarotana fananana ary ny halatra koa aza. Vao haingana no nisy orambe tao amin'ny firenena, ka tonga amin'n'ilay antsoin'ny manampahaizana hoe ‘haintany maitso’. Nanamaitso am-pitaka ny lohasaha tao Lesotho ilay orana nefa ilay saha tsy nisy vokatra na legioma.
Ny tranga ara-toetrandro El Niño no nahatonga ny haintany, izay nahatonga ny olona mihoatra ny 100 tapitrisa tany Afrika Atsimo, Azia sy Amerika Latina ho tsy nisy sakafo.
Namaly ny fanontaniana avy amin'ny olona sy fikambanana.samihafa ny talen'ny Send a Cow ao Lesotho, Manthethe Monethi, nandritra ny fifampiresahana tao anaty Twitter izay naharitra ora iray
Koa satria betsaka kokoa ny orana andrasana tsy ho ela, moa ve efa nanomana sahady “tohodrano vonjimaika” ireo mpisitraka ny #SaCL?
Manome fanampiana ara-tsakafo tahaka ny @WFP ihany koa ve ianareo?
Manahoana @SendaCow, ny orana amin'izao fotoana izao ve mitondra fanatsaràna amin'ny fisian'ny haintany?